Ngaba abafazi banokuthatha i-Primobolan (i-Methenolone Acetate)? | I-powder powder
/Blog/Pregabalin/Ngaba abafazi banokuthatha i-Primobolan (i-Methenolone Acetate)?
ezaposwa ngomhla 11 / 29 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Pregabalin.
Yintoni i Primobolan (i-Methenolone Acetate)?
Kuyiwaphi ukuthenga i-Primobolan yangempela (i-Methenolone Acetate) i-powder eluhlaza kwi-intanethi?
Unokufumana ezininzi ze-Primobolan (i-Methenolone Acetate) umthombo wempuphu ekhompyutheni, kodwa kunzima ukuthenga i-Primobolan yangempela (i-Methenolone Acetate) ekhompyutheni ekhompyutheni. Kukho imithombo emininzi ethengisa iimveliso eziyintengiso kwimarike. ngoko xa uthenge i-Primobolan (i-Methenolone Acétate) izinto eziluhlaza kwi-intanethi, kufuneka ukhethe umthombo onokubuyiselwa.
Njani Primobolan (i-Methenolone Acetate) Sebenza?
I-methenolone yi-dihydrotestosterone (DHT) okanye ingakumbi uhlobo olutshintshile lwe-DHT. Intambo ephindwe kabini kwikhabhoni enye kunye neyebini yongezwa kwi-hormone ye-DHT, eyandisa kakhulu i-hormone ya-anabolic. Kwakhona ihamba neqela elongezelelweyo le-1-methyl elikhuselayo ekuqhekekeni kwe-hepatic. Ukongezwa kwe-Acetate ester kuyakhusela ngakumbi kwi-hepatic metabolism.
Njenge-steroid yomlomo, i-Primobolan yenye ye-steroid yomlomo kuphela yinto engekho i-C17-alpha alkylated (C17-aa) steroid. Ukungabikho kwesakhiwo esiqhelekileyo se-C17-aa, oku kuthetha ukuba umlomo we-Primobolan awunobuthi onobungozi kwisibindi. Nangona kunjalo, ngelixa le ibhonasi, abaninzi baya kufumana umlomo we-Primobolan ukuba ube ngumnene okanye i-steroid yeveki xa kuthelekiswa nabanye abaninzi kwindlela yokuphucula ukusebenza. Amadoda aya kuba nezinga elifanayo lomsebenzi we-anabolic xa kuthelekiswa ne-anabolic steroids ezininzi. Musa ukwenza iphutha, i-Primobolan inendawo yayo kwindlela yokusebenza, kodwa abaninzi abantu baya kufumana i-Depot inguqu ukuba ibe bhetele. Ngokumalunga nabasetyhini, olu bumnene buyingxenye eyenza kube lukhetho oluhle.
I-hormone ye-Methenolone ifana neempawu eziliqela ezifana nezinye i-anabolic steroids ezininzi. Le hormone iya kunceda uphuhliso lweprotheni (ukuya kwizinga) kwaye lunokuchaphazela ngokunyusa ukwanda kweeseli zegazi. Nangona kunjalo, i-steroid ithwala impawu ezintathu ezibalulekileyo ezahlula ngaphezu kwanoma yini enye. I-Primobolan iya kuphucula ngokugqithiseleyo ukugcinwa kwe-nitrogen. Oku kuqinisekisa ukuba i-catabolic state igwenywe kwaye yinto emangalisayo yokwakha izicubu ezinomzimba. Nangona kunjalo, njengoko kuthethwe ngalo le steroid ayiyi kupakisha ngobuninzi besayizi, gcina loo nto ingqondweni. I-hormone nayo iboniswe ukuba inobumbano obunamandla kakhulu obubophelelayo kwi-androgen receptor. Ukuzibophelela okunamandla kwi-androgen receptor kuye kwadibaniswa ne-lipolysis ngqo. Uninzi lwama-anabolic steroids luphucula umlinganiselo wokunciphisa umzimba, kodwa i-Primo njengoko iyaziwayo ngokubonakalayo ibonakala ixhasa ukulahlekelwa ngokuthe tye. Xa siqwalasela oku kunye nokuphuculiswa okuphawulekayo ekugcinweni kwe-nitrogen, sinokuqala ukubona oku kuya kuba yi-anabolic steroid eqinile kwisigaba sokusika.
Umgangatho obalulekileyo wokugqibela we-Primobolan uyimpembelelo kwi-immune system. I-hormone ye-Methenolone iboniswe ukuba ikhulise kakhulu umzimba wokuzivikela. Enyanisweni, sele isetyenziswe ngempumelelo ekuphatheni abo abane-AIDS. Ngomntu onjalo, akafumani nje ukukhuselwa komzimba kodwa ukukhuselwa ngokuthe ngqo kwizinto ezixhaphakileyo zezifo. Ukuxhaswa komzimba okunjalo kuya kunceda kakhulu umdlali wokuphucula ukusebenza ngexesha lesigaba sokusika.
I-Cetilistat powder eluhlaza okwehliswa kwesisindo	I-hormone ye-Sex Improvement Male I-Jinyang Alkali powder